Hello Nepal News » युरोपा लिगको अन्तिम ३२ को ड्र सार्वजनिक : को–को भिड्दैछन् ?
युरोपा लिगको अन्तिम ३२ को ड्र सार्वजनिक : को–को भिड्दैछन् ?
युरोपको दोस्रो ठूलो क्लब फुटबल प्रतियोगिता युरोपा लिग फुटबलअन्तर्गत अन्तिम ३२ को ड्र सार्वजनिक भएको छ । आज युइएफएले स्वीट्जरल्यान्डको नियोनस्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा अन्तिम ३२ को ड्र गरेको हो । च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगको ड्र एकैपटक भएको हो ।
ड्र अनुसार अन्तिम ३२ मा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटडले स्पेनिस क्लब रियल सोसिडाड प्रतिस्पर्धी पाएको छ । युनाइटेड ३ दिनअघि मात्रै च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणबाट आउट भएपछि समूहको तेस्रो स्थानमा रहँदै युरोपा लिगको समूह चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
अन्य ठूला टोलीरूमध्ये इंग्लिस क्लब आर्सनलले पोर्चुगिज क्लब बेनफिका प्रतिस्पर्धी पाएको छ । इटालियन एसी मिलानले रेड स्टार बेलग्रेडको सामना गर्दै इटालीकै नापोलीले स्पेनको ग्रानाडासँग खेल्नेछ । डच क्लब आयाक्सले फ्रेन्च क्लब लियोन प्रतिस्पर्धी पाउँदा इटालियन रोमाले ब्रागा पाएको छ ।
यस्तो छ पूरा ड्र:
प्रकाशित मिति २९ मंसिर २०७७, सोमबार १६:४२